Dawlada UK Oo Somaliland Ka Caawinaysa Kor U Qaadida Adeega Tamarta – HCTV
Dawlada UK Oo Somaliland Ka Caawinaysa Kor U Qaadida Adeega Tamarta
Ahmed Cige 0	May 1, 2019 8:41 am
Somaliland Oo Joojisay Keenista Iyo Ka Ganacsiga Qaadka, Xanuunka Coronavirus Awgii
Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Oo Waraaq Ka Helay Trump
WADDANI Oo Baarlamaanka Ugu Baaqay Inaanu Ansixin Xaaladda Deg-degga Ah Ee Lagu Soo Rogay Sanaag
Barnaamijka Ammaanka iyo Hantida ee Hay’adda Ingiriiska (ESRES) ee UK-ku maal-galiyo, ayaa siinaya dad badan oo ku nool Somaliland inay helaan helitaanka tamarta, nadiifka ah iyo dib-u-cusboonaysiinta.
Iyadoo loo marayo habab wareeg ah, ESRES oo iskaashi la leh Wasaaradda Tamarta iyo Macdanta ee Somaliland (MoEM) ayaa wax ka hadashay kharashka korontada ee aadka u sareeya Somaliland.
Kala duwanaanshaha isku-dhafan ee tamarta kharashka badan ee Somaliland, iyo xoojinta helida tamarta ayaa gacan ka gaysan doonta wax ka qabashada kharashka korantada taas oo caqabad weyn ah. Intii lagu guda jiray barnaamijka ESRES Wajigiisa 1 (September 2015 – August 2018), barnaamijku wuxuu taageeray Wasaaradda Tamarta iyo Macdanta Somailand (MoEM) si loo horumariyo nidaam siyaasadeed iyo nidaam-hawleed, waxana uu hirgeliyay siminaar lagu dhisayo lix qaybood oo yaryar oo isku-xidhan oo hadda ka shaqeeya guud ahaan Somaliland.
Marxaladda labaad ee ESRES (ESRES II) (Sebtembar 2018 ilaa 2021) ayaa kordhin doona maal-galinteeda tamarta dib-loo-cusboonaysiin karo iyada oo loo marayo Sanduuqa Maal-galinta Tamarta Maalgalinta (SREF).
Maalgashigani waa uu gacan ka geysan doontaa kordhinta awood- helitaanka iyada oo loo marayo canshuuraha hoose iyo xidhiidhiyaal badan. ESRES II waxay la shaqeyn doontaa bixiyayaasha adeegga tamarta ee deegaanka si ay u yeeshaan nidaamyo yar yar oo qaybsanayaha habka iyada oo loo marayo nidaamka wadaaga kharashka.
Phil Evans, Madaxa, DFID Somalia, ayaa yidhi “Ka faa’iideystaha ugu weyn ee wajiga cusub ee ESRES wuxuu noqon doonaa dadka reer Somaliland kuwaas oo hadda bixin doona kharash aad u yar si ay kor ugu qaadaan tamarta kor u qaadka marxaladda koowaad ee barnaamijka, waxaan aaminsanahay in marxaladan cusubi ay gacan ka geysan doonto kobcinta koboc dhaqaale oo joogto ah iyo hoos u dhiga saboolnimada Somaliland.
Isagoo ka hadlaya marxaladda labaad ee barnaamijka ESRES, dhacdo lagu qabtay Hargaysa, Agaasimaha Tamarta, Eng. Liibaan Maxamed oo ka tirsan Wasaaradda Tamarta iyo Macdanta ayaa yidhi:
Waxaan rumeysannahay in arintani ay muhiim u tahay Sanduuqa Maalgalinta Tamarta Cusub ee Somaliland oo hoos imaaneysa Barnaamijka ESRES. Munaasabaddan ayaa nagu dhiirigelinaaya inaan dhamaanteen nala wadaagno fikradaheena, isku duwo dadaalladeena, waxaanan u dardar-galeynaa fekerkayaga ku saabsan guusha barnaamijkan.
Waxaan jeclaan lahaa in aan sii wado qaddarinta qadarinta ugu sareysa Dawladda Boqortooyada Ingiriiska iyo bixiyayaasha canshuurta ee Ingiriiska si ay u taageeraan Wasaaradda si ay u siiyaan adeegga korantada, la isku halayn karo oo la awoodi karo dadka reer Somaliland. Somaliland iyo Ingiriiska labaduba waxay leeyihiin xidhiidh saaxiibtinimo, taageeradan deeqsinimo leh iyo saaxiibtinimo waxay dhiirigelinaysaa oo ay u qadarinaysaa dadka reer Somaliland.
Maraykanka Iyo Ururka Daalibaan Oo Kulan Ku Yeeshay Doxa, Qatar